Umatshini we-pellet umatshini unceda iHarbin Ice City iphumelele "Imfazwe yoKhuselo yeSibhakabhaka" | IKingoro
Oomatshini beBhellet Pellet
I-45Kw (0.5-0.7t / h)
I-55Kw (0.7-0.9t / h)
I-55Kw (0.7-1.0t / h)
I-132Kw (1.5-2.0t / h)
Yondla oomatshini bePellet
Umatshini wokomisa ojikelezayo
Pellet Ukupakisha Machine
Umatshini we-pellet umatshini unceda iHarbin Ice City iphumelele "iMfazwe yoKhuselo yeSibhakabhaka"
Umnxeba: +86 13953111589
Idilesi: Inombolo ye-666 Fengnian Road, iSixeko saseJinan, kwiPhondo laseShandong, China
Phambi kwenkampani yokuvelisa amandla e-biomass eFangzheng County, eHarbin, izithuthi zimiselwe ukuhambisa iindiza kwisityalo.
Kule minyaka mibini idlulileyo, iFangzheng County, ixhomekeke kwizibonelelo zayo, izise iprojekthi enkulu ye "Straw Pelletizer Biomass Pellets Power Generation" ukuzinza.
Kwi-2021, iprojekthi yamandla aluhlaza iya kugxothwa ngokupheleleyo, kwaye iqhubele phambili kwinjongo ekulindelweyo, ukunceda iHarbin Ice City iphumelele "iBlue Sky Defense Defense".
"Umrhwebi" ngokusebenzisa isetyhula loshishino lwezolimo
“Abathengisi be-'straw 'kumhlaba omnyama mabenze iinkomo zomququ zibe yimincili.
Kulo nyaka, u-Li Renying uthenge i-baler ye-straw kwaye wenza uthutho lwezithuthi. Phantsi kombutho wakhe, iitoni ezingama-12,000 zomququ eziveliswe phantse kwiihektare ezingama-30,000 zamasimi erayisi kwilokishi yaseBaoxing zipakishwe ngempumelelo zayishiya intsimi.
Abahlali kwakungekho mfuneko yokuba wolule izandla zabo kwaye ngaphandle kwamandla, kwaye umququ washiya intsimi ulungiselela ukulima kwentwasahlobo. Umsi wokutshiswa kweendiza wawungasabonakali emaphandleni, kwaye imeko yayiba ngcono nangcono. Ukuba "ngumrhwebi" weendiza kuzise phantse i-yuan engama-200,000 yengeniso ku-Li Renying.
Ukuchuma kwezolimo ngenzululwazi kunye netekhnoloji kunika amathuba amaninzi. Ngo-2019, kuxhomekeke kubuchwephesha bokuguqula amandla obuchwephetshe be-biomass, iprojekthi ye- “Biomass Power Generation”, enye yeeprojekthi ezili-100 ezikhulu kwiphondo, ezinze eFangzheng, kunye nolwakhiwo lomzi-mveliso wombane oshushu osebenzisa umququ njengombane wokuphehla umbane kwaqala ubushushu.
Umququ unokusetyenziswa njengamalahle kwaye awunabungozi kokusingqongileyo. ” Nge-1 kaDisemba ngo-2020, le projekthi yayiqhagamshelwe ngokusemthethweni kwigridi yokwenza umbane. U-Li Renying watyikitya ikhontrakthi yokubonelela ngengca kunye nenkampani kwangaphambili kwaye ngokusemthethweni waba "ngumthengisi weendiza."
“Kwimihlaba engalungelanga ukusebenza koomatshini bezolimo, iindiza azinakwaphulwa zibuyiselwe ebaleni. Sinoxanduva lokubhabha nokushiya umhlaba, ukuwuthumela kumzi-mveliso wamandla ashushu ukuze wamkelwe kwaye ulinganiswe, emva koko uwasebenzisele ukuvelisa umbane kunye nokuvelisa ubushushu. ” U-Li Renying usixelele ukuba nangona udiniwe, umququ ubanzi. Ukusetyenziswa ngumzi-mveliso wokuphuma kwelanga kwaye kuyavakala. "Ukubona ukuba isibhakabhaka siluhlaza kwaye amanzi acacile kwidolophu yasekhaya, thina bantu sonwabile." U-Li Renying naye ufumene imeko yokuzingca "njenge-stalk broker".
Ukusukela ekuphehleleni umbane ngombane, inkampani ithenge ngaphezulu kweetoni ezingama-100 000 zezinto eziphilayo ezinjengombona, irayisi straw, ikhoba lelayisi, njalo njalo, ukuvelisa umbane weeyure eziyi-7.7 yezigidi zombane. Umlawuli wemveliso yeFangzheng County Biomass Power Generation Inkampani wazisiwe.
Ingxelo yomsebenzi kaRhulumente wase-Fangzheng kulo nyaka ikwabonakalise ukuba kunyanzelekile ukukhuthaza inkqubela phambili entsha kulwakhiwo lwendalo, ukukhuthaza ngokuthe ngcembe “indawo yokuhlala”, ngokuthe ngcembe ukwenza imveliso eluhlaza kunye nendlela yokuphila, kwaye kwandise kakhulu ukusetyenziswa kwezixhobo kunye amandla.
Amandla aluhlaza e umatshini pellet umatshini Uncedise iHarbin Ice City ukuba iphumelele "iMfazwe yoKhuselo yeSibhakabhaka esibhakabhaka".
Ixesha Post: Apr-09-2021
Kingoro Biomass Pellet Machine ngo-2021 AS ...
Shandong kingoro oomatshini 2021 ifoto ...
Isityumzi somthi, IBelt eqhutywa ngeHammer Mill, Ukutya kwezilwanyana iPellet Mill, I-Garden Wood Chippers, Ukusila Machine For Wood, Ukutya kwezilwanyana iPellet Machine,
Nceda ugcwalise indawo efunekayo.